Top fitsaboana anjerimanontolo any Ukraine 2017 - Education Rahalahy
“EducationBro” Magazine manomana ambony ny fitsaboana oniversite any Ukraine. Manantena izahay fa vaovao izany dia hanampy ireo mpianatra iraisam-pirenena hifidy safidy tsara indrindra ny mandalina ny fitsaboana in Ukraine. Mbbs antokony in Ukraine manana kalitao avo sy iva ny saram-pianarana.
Inty top 8 ara-pitsaboana tsara indrindra anjerimanontolo any Ukraine:
Ternopil State University Medical naka 8 mametraka ao amin'ny ambony ny fitsaboana oniversite. Toy izany koa tahaka ny tamin'ny taon-dasa.
Izay tsara eo TSMU? Voalohany indrindra – mpianatra vahiny tia azy.
Rehefa nanoratra ny naoty, dia niresaka ireo mpianatra avy amin'ny anjerimanontolo. Mpianatra ny Ternopil Medical Institute namaly tena tsara momba ny oniversite ary nilaza fa tiany mianatra eto. Mandritra izany fotoana izany, dia nanamarika fa maro ny campus ny oniversite ilain'ny maoderina. By maharatsy ny mifampiresaka raha nitantara fa ny tanàna dia somary mankaleo, misy kely fialam-boly. Fa eto levitra fanabeazana, izay zava-dehibe ho an'ny mpianatra maro. Manantena izahay fa Ternopil State University Medical dia hanatsara tant toerana amin'ny herintaona.
Donetsk National University Medical manana fotoana ratsy izao. Izany dia zaza faha- 3 taona lasa, fa nahazo toerana ihany no faha-7 ao 2017. Noho ny ady any atsinanan'i Ukraine, dia noterena hanova an-tanànany. Izany dia tena nisy fiantraikany ratsy eo amin'ny toerana ao amin'ny fandaharana. Raha tsy noho ity zava-misy, isika dia ho nikasa hanome azy toerana voalohany na faharoa.
Manantena izahay fa mbola tsara kokoa noho izany anjerimanontolo fotoana ho avy tsy ho ela. Amin'izao fotoana ny mpianatra dia afaka mitady izay tsara lavitra safidy.
Toy izany koa tahaka ny tamin'ny taon-dasa. ODNMU nahazo 6 toerana in ambony. Oniversite iray hafa izay maka toerana ambany noho ny tranonkalany sy ny ara-tsosialy mombamomba. Indrisy anefa fa izany no olana lehibe ny anjerimanontolo Okrainiana.
Na dia eo aza ny zava-misy fa antony io dia manana ny kely indrindra fiantraikany eo amin'ny toerana ao amin'ny fandaharana, dia ampy fa ny anjerimanontolo tsy afaka hitsangana ambony 6 tsipika. Mazava ho azy, antitra ny fitaovana sy ny hevi, mitaky fanamboarana ny ratsy ihany koa. Ny University no misy ao an-tanànan'i Odessa, dia ny fialan-tsasatra sy ny seranan-tsambo lehibe indrindra ao amin'ny firenena. Izany dia manome fahafahana lehibe ho an'ny fialam-boly ny mpianatra, fa izao no vokany ratsy eo amin'ny vidim-piainana. ny mpianatra’ hevitra momba Odessa National University Medical tsy mitovy. Tsy ny mpianatra rehetra no afa-po tanteraka ny oniversite.
Number 5 indray. Nahoana no tsy izy ireo tambajotra sosialy. Ary ny oniversite tranonkala mila fanavaozana. Tena mahatsiravina ny lehibe isan'ny anjerimanontolo Okrainiana. Ary ny Ivano-Frankivsk National University Medical.
City dia tsy lehibe. Sasany ratsy mpianatra manana heviny momba ny anjerimanontolo, fa hoy ny sasany: fa tsara. Manana heviny hafa momba ny kalitaon'ny fampianarana, fa betsaka ireo mihevitra fa lafo kokoa ny fampianarana ao amin'ny oniversite ara-pitsaboana iray hafa ao amin'ny Ukraine.
Io no oniversite tsara indrindra tamin'ny taon-dasa eo amin'ny fandaharana, fa tsy izany very 3 positions. Bogomolets National Medical University is good, fa dia tena lafo vidy, ary ilaina prepaymen avy amin'ny mpianatra iraisam-pirenena.
Izany no misy ao an-drenivohitra ny Ukraine – Kyiv. Manana toetra tsara ny fampianarana sy ny ankehitriny fotodrafitrasa ho an'ny mpianatra. Also it is difficult to study here. Noho izany, if you going to study medicine in Ukraine and have a lot of money, dia afaka misafidy Bogomolets National University Medical.
Lviv National University Medical nitsangana ny toerana faharoa amin'ny fandaharana. Na dia eo aza ny hevitra samy hafa momba ny oniversite, mpianatra rehetra dia tena afa-po amin'ny tanànan'i Lviv. Staff ny EducationBro Magazine tia ny campus sy ny kalitaon'ny fanabeazana. Tena tsara izany oniversite mba hianatra ny fitsaboana any Ukraine. Matoky isika fa ny anjerimanontolo dia mendrika ny laharana faharoa tamin'ny taona ity. Iza no mahalala, angamba kely ny ezaka, ary dia hivoaka an-tampon'ny avy ny taona? Ho hitantsika.
2. Vinnytsia National University Medical
Vinnytsia National University Medical took 3rd position in our rating this year.
Mpianatra amin'ny anjerimanontolo io dia manana heviny tsara momba azy io koa. Fantatsika ihany koa fa io no malaza any University mpianatra vahiny. Na izany aza, Mariho fa isika VNMU mahantra manana tranonkala,dia tsy nahita ny pejy ofisialy amin'ny tambajotra sosialy. Ary gaga be izahay rehefa nahita thatt ny mifandray pejy Foana. Miaina eo amin'ny tontolo maoderina ary mihevitra fa tokony manana anjerimanontolo rehetra feno Ireo lahatsoratra ao amin'ny tambajotra sosialy ambony. Isika koa mihevitra fa ampahany lehibe amin'ny oniversite ny fitaovana dia lany andro, ka mila fanavaozana.
Ity ny fitsaboana-tampon'ny oniversite any Ukraine 2017!
Bukovinian State University Medical Tena malaza sy malaza any Ukraine. Izany no misy ao amin'ny tanàna kely, Fa ity tanàna ity manana ny hatsarany. Tena faly izahay gaga ity tanàna ity sy ny rivo-piainana. Manamafy izany University vokany kokoa. Jereo fotsiny ny tena trano. Koa izahay tiany ny tena ilaina ny saram-pianarana sy ny kalitaon'ny fanabeazana. Ny ankamaroan'ny mpianatra ihany koa ny nino fa ny anjerimanontolo tena tsara. Tamin'ity taona ity Bukovinian State University Medical tena mahagaga toerana hianatra taranja ara-pitsaboana (General Medicine, Dentistry, Pharmacy, Nursing) any Ukraine sy Eoropa.
Tamin'ity taona ity toerana 1 nahazo anjerimanontolo amin'ny ambany ny saram-pianarana sy ny fiainana mora vidy ny vola lany. Mandritra izany fotoana izany, izany oniversite lehibe. Noho izany, tena mihevitra fa amin'ity taona ity dia ho mora kokoa ho an'ny mpianatra ny misafidy fianarana ara-pitsaboana ho an'ny oniversite any Ukraine.. Eto ianao dia hahazo ny tsara dia tsara ny fampianarana ara-pitsaboana, sy ny mpianatra ny fiainana dia ho mamirapiratra sy falifaly.
Iza no mahalala, ny zavatra mety hiova ny taona! Na izany na tsy, Ukraine dia toerana lehibe ho an'ny fianarana fanafody. Tena tsara tarehy sy ny vidim-piainana sy ny saram-pianarana.
Vidim-piainana any Ukraine